Ny dikan'ny anarana hoe Victoria. Ny Mystery of Victoria
Inona no atao hoe Victoria
Victoria dia vehivavy saro-kenatra sy malefaka. Tsy tia fifandonana izy, mamela haingana ny fimamoana azy. Amin'ny fahazazana, dia mamirapiratra izy io, ary indraindray dia somary manenjika ny olona. Ho an'ny tanjona voafaritra dia handroso am-panajana sy amim-pahamatorana izany, mandra-pahatongany.
Avy amin'ny teny latinina, ny anarana hoe Victoria, dia midika hoe "fandresena."
Ny niandohan'ny anarana Victoria:
Amin'izao fotoana izao dia misy teoria maromaro momba ny niandohan'ny anarana Victoria.
Araka ny voalazan'ny teôlôjia voalohany, ny anarana hoe Victoria dia tonga taminay avy tany Ancient Greece. Misy ny endrika iombonana - Quiz, izay midika hoe "mpandresy" amin'ny dikanteny.
Araka ny filazan'ny teoria iray, dia anarana Romanina tranainy indrindra i Victoria. Hita ao amin'ny angano romana izy io. Io anarana io no anaran'ilay andriamanitry ny fandresena taloha, izay ela niainana talohan'ny niandohan'ilay panteonin'ny andriamanitra romanina.
Ny natiora sy ny fandikana ny anaran'i Victoria:
Matetika i Little Vick no mitaiza ny rainy. Amin'ny ankapobeny dia zanaka malalaka sy voalanjalanja izany, matetika, mahaleotena ary tsy mampihetsi-po. Noho ny fahakelezany voajanahary, dia zara raha maharesy lahatra ny lalao ankizy izy. Tia mihaino ny ray aman-dreniny mamaky boky ho azy i Vika, saingy tsy te hianatra hamaky ela izy. Matetika i Vika no malahelo ny ray aman-dreny noho ny tsy fahampian-dry zareo.
Amin'ny fahatanorany, manomboka "miaina" i Victoria, lasa miharihary kokoa sy mifankatia kokoa. Saingy rehefa nianatra ny tsy handresy ny fahatsarany ny ankizy, amin'ny fiezahana hanamafy ny tenany, dia afaka mamolaka ny tenany amin'ny fomba mahery vaika izy-manao akanjo marevaka loatra, mametraka loko marevaka loatra. Izany fihetsiketsehana izany, izay vokatr'izany, dia hiorina amin'ny toetran'i Vicki ary ho lasa iray amin'ireo toetrany lehibe indrindra.
Any am-pianarana, i Victoria dia mianatra "tsy dia tsara loatra". Matetika, tsy mahatakatra ny fitaovana ampiasain'ny lesona, tsy manao devoara. Miara-mipetraka amin'ny mpiara-mianatra. Tsy handray andraikitra ara-tsosialy velively izy. Ary raha voatery manery azy io, dia hanandrana handefa izany amin'ny olon-kafa amin'ny fomba rehetra izy na hanatanteraka izany "aorian'ny andaniny". Ny mpampianatra mihoatra ny indray mandeha dia hanome tsiny Victoria noho ny tsy fahaizana sy ny tsy fanekena. Saingy ny tanora, na dia eo aza ny fisarahana amin'i Vicki, dia manasitrana foana azy. Voalohany indrindra, ho an'ny fandriampahalemana, ny fahamendrehana ary ny tsy fifandirana.
Rehefa misafidy asa iray i Victoria dia tokony hifidy izay tsy mitaky fifandraisana tsy tapaka amin'ny olona. Na dia eo aza ny herisetra rehetra, Victoria, raha ny marina, dia mety ho modely mahomby, modely, mpilalao sarimihetsika. Ny asa tsara dia nampanantenaina azy tahaka ny mpanoratra, cook, economista, kaonty, mpanorina. Na dia izany aza, tsy afaka hitarika an'i Victoria i Victoria - izy dia mila mandray ny fanoherana madinika avy amin'ireo mpiara-miasa aminy ihany, satria mihena ny asany sy ny asa aman-draharahany.
Ny Partner Victoria dia misafidy tsara, mampiseho, indraindray ny fepetra takiana amin'ny vadin'ny hoavy. Ary na dia efa manambady aza izy, dia misalasala izy raha nanao safidy tsara. Raha manampy an'i Victoria hamantatra ny fahamarinan'ny safidiny ny vadiny, dia ho lasa tsy mivadika aminy izy, mahatoky ary mivadika.
Miaraka amin'ny fahaterahan'ny ankizy, Victoria dia mitazam-pandrosoana mandritra ny fotoana lava, misalasala raha mety hampianatra azy tsara sy tokony hanome azy. Ho lasa reny i Vika dia tsy hikarakara ny fivoaran'ny fitondran-tena ara-moraly ny zanany, fa hanome azy ireo tsara kosa.
Zavatra mahaliana momba ny anaran'i Victoria:
Ny Victoria dia nomena toerana maro samihafa eto amin'ny planeta, fanjakana sy renirano any Aostralia, ireo tanàna any Etazonia, Arzantina, Chile, Kanada, El Salvador, Meksika, ny renirano sy ny farihy any Afrika, tendrombohitra any Nouvelle-Guinée, ireo nosy any Arktika.
Ankoatra ny planeta misy antsika ihany koa i Victoria - asterôdy, io arabe io dia eo anelanelan'i Mars sy i Jupiter.
Ny anarana dia ampiasaina betsaka amin'ny anaran'ny klioban'ny fanatanjahan-tena sy ny zavakanto.
Anarana any Victoria amin'ny fiteny samihafa:
Anarana amin'ny teny anglisy: Victoria (Victoria)
Anarana amin'ny teny sinoa mandarina: 维克托莉娅 (Wake Valley)
Anarana amin'ny teny japoney: ヴ ィ ク ト ー リ ア (Wy-ku-to-ri-a)
Anarana amin'ny teny espaniola: Victoria (Victoria)
Anarana amin'ny teny anglisy: Wiktorija (Victoria)
Anarana amin'ny teny poloney: Victoria (Victoria)
Victoria any Okraina: Вікторія
Vikus, Vikusya, Vika, Vikula, Viktaya, Tosha, Tusya, Vikusa, Vita, Vitula, Vitusya, Vitusa, Vitia, Vira, (Torja), Tori, Victorka
Saron'ny anaran'i Victoria : volomparasy
Nicky ho an'ny anaran'i Victoria / Vic: Tory, Vicky, Tosha, Kusia, Rivo-doza, Tornado, Waterfall, Victory, No_War, Mpandresy, COOL-I
Masoivohon'i Maraoka any Okraina
Iza ny anaran'i Jan
Ambasadin'i Maraoka ao Kazakhstan
Ambasady Bosnia sy Herzegovina ao Okraina
Ilay mpilalao sarimihetsika Jared Leto dia nanao resadresaka fohy tao amin'ny Icon El Pais ary nibanjina sary mamirapiratra
Akanjo mariazy miaraka amin'ny lolo
Nahoana ny nofy no handeha amin'ny fasana?
Manaova maso mason'ny mavo mena
Trano anatiny chalet
Breziliana an-tampony: Gisele Bundchen sy Adriana Lima - modely "lafo indrindra" amin'ny taona
Ahoana no hanafenana thuja amin'ny ririnina?
Tena ilaina ny kvass
Mpilalao sarimihetsika Drew Barrymore: fisarahana sy fifandraisana vaovao?
Tavoahangy misy sira